Q မဝင်ချင်ရင် ၃၀၀၀၀ ပေးလို့ ရတယ်တဲ့..၊ ခုထိ Q မဝင်ချင်လို့ ၃၀၀၀၀ ပေးပြီးဝင်လာတာ လူအယောက် ၁၈၀ ရှိပြီတဲ့..ဘုရား…ဘုရား… – Na Pann San
Q မဝင်ချင်ရင် ၃၀၀၀၀ ပေးလို့ ရတယ်တဲ့..၊ ခုထိ Q မဝင်ချင်လို့ ၃၀၀၀၀ ပေးပြီးဝင်လာတာ လူအယောက် ၁၈၀ ရှိပြီတဲ့..ဘုရား…ဘုရား…
ယခုပို့စ်ကို Tinaung Kyaw အကောင့်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည် …။
မိုးညိုက မိတ်​ဆွေ​တွေလာလို့စကား​ပြော​နေတုံး မှာ မိုးညိုက မိတ်​ဆွေထံ ထိုင်းကပြန်လာ တဲ. သူက ph ဆက်ပြီး ​အောင်မဂ်လာမှာလာ​ခေါ်ဖို့ ​ပြောသံကြားတာ နဲ. ကိုယ်လည်းလန့်သွားပြီး အမြန်လမ်းထိပ် သုညမိုင် ကို ဘယ်လို​ကျော်လာလည်း​မေး​ကြည်​တော့ မှ ထိပ်လန့်ဖွယ်အမှန်တရားကိုသိလာရတယ်။
ဂိတ်ဆုံးထိစီးလာသူနှစ်ဦးက မိုးညိုက ၁ ဦးနဲ. အုပ်ဖိုက တစ် ဦးပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံဘိန်းမြို့နှင့်ချယ်လမ်းမြို့ကပြန်လာကြတာပါ ။ မဲဆိုင်မြို့မှာပရဟိတ အဖွဲ့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးက ကြူဝင်ရန်မလိုဆိုပြီး ၃၀၀၀၀ ဆီယူပြီးတင်​ပေးလိုက်တာပါ ။ သူတို့အဖွဲ့ကတင်​ပေးတာ ၁၈၀​ ကျော်ပြီလို .ပြောတယ်။ ဒီကားနဲ.ပါ။ ၁၈​ယောက်ပါပါတယ် ။လမ်းတစ်လျှောက် အစစ်အ​​ဆေးမရှီ ၁၆​ယောက်ဆင်းသွား ပါပြီ။ ဒီနှစ်​ယောက် ကို သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်covid​ကော်မတီနှင့်ဆက်သွယ်​​​ပေး ခဲ.ပါသည်။ မိုးညိုသားက အကုန်​ပြောပြ ပါသည် ။
သက်ဆိုင်ရာသို.တင်ပြထား ပါသည် ။
မူရင်းသတင်း တင်ပေးသောလင့်fပုံလေးကိုနှိပ်ဖတ်ပါ
မိုးညိုက မိတျဆှတှေလောလို့စကားပွောနတေုံး မှာ မိုးညိုက မိတျဆှထေံ ထိုငျးကပွနျလာ တဲ. သူက ph ဆကျပွီး အောငျမဂျလာမှာလာချေါဖို့ ပွောသံကွားတာ နဲ. ကိုယျလညျးလနျ့သှားပွီး အမွနျလမျးထိပျ သုညမိုငျ ကို ဘယျလိုကြျောလာလညျးမေးကွညျတော့ မှ ထိပျလနျ့ဖှယျအမှနျတရားကိုသိလာရတယျ။
ဂိတျဆုံးထိစီးလာသူနှဈဦးက မိုးညိုက ၁ ဦးနဲ. အုပျဖိုက တဈ ဦးပါ။ ထိုငျးနိုငျငံဘိနျးမွို့နှငျ့ခယျြလမျးမွို့ကပွနျလာကွတာပါ ။ မဲဆိုငျမွို့မှာပရဟိတ အဖှဲ့ကဘုနျးကွီးတဈပါးက ကွူဝငျရနျမလိုဆိုပွီး ၃၀၀၀၀ ဆီယူပွီးတငျပေးလိုကျတာပါ ။ သူတို့အဖှဲ့ကတငျပေးတာ ၁၈၀ ကြျောပွီလို .ပွောတယျ။ ဒီကားနဲ.ပါ။ ၁၈ယောကျပါပါတယျ ။လမျးတဈလြှောကျ အစဈအဆေးမရှီ ၁၆ယောကျဆငျးသှား ပါပွီ။ ဒီနှဈယောကျ ကို သကျဆိုငျရာမွို့နယျcovidကျောမတီနှငျ့ဆကျသှယျပေး ခဲ.ပါသညျ။
မိုးညိုသားက အကုနျပွောပွ ပါသညျ ။
သကျဆိုငျရာသို.တငျပွထား ပါသညျ ။ ဒီအတိုငျးဆိုမလှယျပါ ။
LGBT ကောင်လေးအား လည်ပင်းဓားဖြင့် လှီးကာ ဆိုင်ကယ် လုယက်မှု မော်လမြိုင်တွင်ဖြစ်ပွား…
လူနာနံပါတ် ၃၃ ၊ ၃၄ ၊ ၃၅ နဲ့ ၃၆ သာသာရေးပွဲတက်ခဲ့သူ လူနာ ၄ ဦး ရဲ့ ထိစပ်မှုနောက်ကွယ်